Oromiyaatti dargaggoota waliin mariin taasifamaa jira- obbo Admaasuu – Fana Broadcasting Corporate
Oromiyaatti dargaggoota waliin mariin taasifamaa jira- obbo Admaasuu
Finfinnee, Caamsaa 6,2011(FBC)- Hirmaannaa cimaa dargaggootatiin ala diinagdeen Oromiyaa cee’uu hin danda’u jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon.
Obbo Admaasun dargaggoonni diinagdee naannichaa utubuu keessatti ga’een qaban olaanaa ta’uu ibsaniiru.
Ga’ee dargaggootaa kana guddisuuf mootummaan naannichaa tumsa barbaachisaa gochuuf cichooman hojjechaa jiraachuu himan.
Riifoormii siyaasaa fi diinagdee gaggeessudhaan fayyadamtummaa ummataa mirkaneessuuf sochii bal’aa taasisuu eegaleen, injifannoowwan boonsaa ta’an galmaa’aa jiraachuu ibsan obbo Admaasun.
Carraa hojii uumuu, bu’uuraalee misoomaa diriirsuu, kiraa sassaabdummaa diiguu, rakkoolee bulchiinsa gaarii hiikuuf hojiin jalqabame abdachiisaa ta’us, baay’ina qeerroo fi qarree akkasumas fedhii hawaasaa qabnuun cimnee hojjachuu qabna jedhaniiru.
Sanaaf ammoo dhiyeessii faayinaansii fi iddoo oomishaa fi gurgurtaarratti bal’inaan hojjetamaa jiraachuu himan.
Magaalota Oromiyaa gurguddoo 18, godina 17, aanolee 278 keessatti mariin dargaggoota hirmaachise gaggeeffamaa jira jedhan hoggantichi.
Hoji dhabdoota 499,282 hojiitti galchuuf karoorfamee hojjetamaa kan jiru ta’u fi ji’a 9 keessatti akka naannootti dhaabbiidhaa fi yeroon nama 825,000 hojii qabsiisuuf karoorfamee, nama 645,761 qabsiisuun kan danda’ame ta’uu obbo Admaasuu Daamxon beeksisaniiru.
MM Dr Abiy Ahimad Suudaan Kaartuum jiru
Obbo Ashaadlii fi obbo Tamasgeen Hidha Haaromsaa daawwatan
Buufataaleen xiyyaaraa 5 fi tarminaalonni 6 Birrii biiliyoona 4n ijaarramuufi
MM Dr Abiy Ahimad badhaasa tuuriizimii addunyaatif filataman
Oromiyaan qabxiin qormaata seennii dhaabbilee barnoota…
Jaappaan filannoo biyyoolessaa Ityoophiyaa deeggaruuf…
Preezdaant Saalvaakiir feestivaala nageenyaarratti ni…
Waltajjiin bulchiinsa naannoo Kibbaarratti gaggeeffamaa ture…